QIIMAYN: Maxaa Suuqa Ka Haysta Kooxaha Premier League? Haddii Uu Maanta Furmi Lahaa Horyaalka Premier league Siday Xaalada Kooxaha Waa Wayni Noqon Lahayd. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 25, 2019 at 12:26 QIIMAYN: Maxaa Suuqa Ka Haysta Kooxaha Premier League? Haddii Uu Maanta Furmi Lahaa Horyaalka Premier league Siday Xaalada Kooxaha Waa Wayni Noqon Lahayd.2019-06-25T12:26:40+01:00 CAYAARAHA
Kooxaha Premier league ayaa xagaagan ku dhibtoonaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxayna ku jiraan heerkii ugu hooseeyay ee ay ciyaartoy waqtigan oo kale kula soo saxiixan jireen.
Xaalada suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee lixda kooxood ee Premier league ugu waa wayn ayaa gabi ahaanba kala duwan iyada oo kooxaha qaar u baahan yihiin dib u dhis dhamaystiran halka kuwo kale ay u baahan yihiin xoointa meelo gaar ah.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa dhaq dhaqaaqa liita ee ay ilaa hadda suuqa ka samaynayaan kooxaha waa wayn ee premier league, dhibaatada ay u keeni karto iyo waliba sida ay kooxuhu u kala liidan lahaayeen haddii uu maanta horyaalku furmi lahaa.
Ugu horayn waxaa hubaal ah in kooxaha premier league ay xagaagan noqdeen kuwo si lama filaan ah gaabis ugu ah adeegii suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee ay xili horeba rekoodhka jabin jireen, waxayna hadda ka mid yihiin horyaalada lacagta ugu yar suuqa galiyay.
Waxa kale oo xaalad adag abuuri karta in suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Premier league uu xidhmi doono waqti ka horaysa dhamaan horyaalada kale ee yurub, wuxuuna sharcigu sheegayaa in maalin ka hor waqtiga uu kulanka ugu horeeya ee Premier league dhacayo uu suuqu xidhmo.
Waxay taasi la micno tahay in suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Premier league uu xidhmi doono ka hor Agusut 9 markaas oo ah waqtiga ay Liverpool iyo Norwich City isku taaban doonaan kubbada ugu horaysa ee xili ciyaareedka cusub.
Sidii ay kooxaha premier league ku heshiiyeen November 2018, waxa uu suuqa kala iibsiga horyaalka Ingiriisku xidhmi doonaa maalinta khamiista, August 8,2019, waxaanad qiyaasi kartaa muddada u dhexaysa hadda iyo taariikhdan oo kooxaha aad ugu yaraan karta.
Marka hore Aan Idiin Soo Gudbiyo Halka uu Premier league Kaga Jiro Lacagta Suuqa Ilaa Hadda la Galiyay Ee Horyaalada Yurub guu waa wayn.
3-Serie A: €352M
4-Premier League: €197M
5-Ligue 1: €36M
Ma aha wax looga bartay in horyaalka Premier league uu ku jiro kaalinta afraad ama wax la mid ah waxaana ka hooseeya oo kaliya horyaalka France waxayna muujinaysaa in kooxaha Ingiriisku ay si aan hore looga baran suuqa kala iibsiga ugu dhibtoonayaan.
Haddaba halkan kaga bogo qiimaynta xaalada lixda kooxood ee Premier league ugu waa wayn iyo saamaynta ay ku yeelan karto suuq xumada ay ilaa hadda ku jiraan.
1-Xalada Suuqa Ee Chelsea Iyo Haddii uu Maanta horyaalku furmi lahaa Saamaynta Ay Ku Yeelan lahayda:
Chelsea waa bilaa tababare, waxaa ka baxay xidigii kooxdeeda ugu fiicnaa ee Eden Hazard, waxaa lagu soo rogay ganaaxa dhinaca suuqa kala iibsiga ah, wali hal saxiix ma samayn karaan inta ay go’aan ka helayaan maxkamada xalinta khilaafaadka sportska ee CAS, waana nooc kasta oo dhibaato oo isbiirsaday.
Waxay sidaa Chelsea ku tahay kooxda ugu xaalada xun lixda kooxood ee Premier league ugu waa wayn waxayna walwal badan jamaahiirta Blues ka qabaan sida ay xaalada kooxoodu noqon doonto khamiista, Agusut 8 markaas oo uu suuqu xidhmi doono isla markaana diyaar loo noqon doono kulamada furitaanka.
Saddexda dhibaato ee aan soo sheegnay, waxay Chelsea ka dhigtay in haddii uu maanta furmi lahaa horyaalka Premier leauge ay noqon lahayd kooxda wayn ee dhibaatada ugu badan ku jiri lahayd, waxayna wali haystaan waqti ay xaalada wax kaga badali karaan.
Chelsea waa kooxda kaliya ee ayna wali waxba gacmaheeda ku jirin marka ay noqoto suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waxa kaliya ee ay qabaan waa rajo ah in maxkamada CAS ay ka helaan go’aan ay saxiixyo ku sii samayn karaan xagaagan si xataa haddii ay suurtogal tahay ganaaxa dib loogu dhigo.
Sidaa daraadeed, xaalada kooxda Chelsea waa xaalada maanta ugu xun ee ay koox wayn oo premier league ahi ku jirto, waxaana la sugayaa sida ay wax isku badalaan muddada bisha iyo badhka ah ee ka hadhsan xili ciyaareedka cusub ee Premier league.
Riix 2,3,4,5 si aad koox kastaba qiimaynta iyo xaaladeedau Akhrisato.
« AFARTAN Shaxood Midkood Ayay Barcelona & Lionel Messi kusoo Shirtagi Doonaan Xilli Ciyaareedka Dambe Oo Ay Kaga Bixi Doonaan Abaarta Champions League.
Madaxweynaha Soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirada cusub ee dalalka Canada iyo Austria »